Aya ndiwo maitiro iOS 11 akachinja kubva Beta 1 kuenda Beta 10 | IPhone nhau
Aya ndiwo maitiro iOS 11 akachinja kubva Beta 1 kuenda Beta 10
Kubva kutanga kwechikamu chayo chekuvandudza tanga tichiedza ese maIOS 11 Betas kwauri, saka wakakwanisa kuona ruoko rwekutanga kuti rwashanduka sei uye rwakatisiya tichishamisika. Asi sezvo kurirava hakuna kufanana nekuriona nemaziso ako, Isu tinokusiira iwe ino yekufananidza vhidhiyo yekuita kweIOS 11 kubva kune yekutanga Beta kune izvo isu zvatinofungidzira kuti ichave yekupedzisira.
Iwe unoda aya mavhidhiyo ekuenzanisa, kunyanya kana usati wamboedza kuisa iyo Beta vhezheni yeanoshanda system, uye kupihwa kumashure ndiyo nzira yakanakisa yekuora mwoyo neIOS. Handei ikoko neiyi inonakidza kwazvo graphic bvunzo.
Kamwe zvakare vhidhiyo yacho inopihwa neakanakisa vakomana kubva iAppleBytes kuti bvunzo dzekuita idzi dzinogara dzichisiya isu. Isu tinofanirwa kutanga tatanga kuverenga kuti shanduko yakakosha yatakawana kubvira yekutanga Beta kuzvitongaShanduro shanu dzekutanga dzeIOS 11 dzaisakwanisika kushandisa mune zvakajairika zuva nezuva nekuda kwekuenderera kuri kuita bhatiri, zvaitaridzika kuti mamwe mapurogiramu akange akanamira kumashure, kunyangwe hazvo iko kwekuti kuita kwese kwainge kusiri kunyatsoipa.
Humwe uipi hwave kudhonza hwave iko kwemamwe mabhatani mune iyo nyowani skrini yekugadzirisa sisitimu, pamwe nekungogara kuri kusarongeka muiyo 3D Kubata. Parizvino iOS 11 Beta 10 chirongwa chakakwenenzverwa zvizere, mukati mehunhu hwehunhu hwatinogona kukumbira kubva kuBeta yakajeka. Chokwadi ndechekuti nhasi iOS 11 inogona kushandiswa senzira inoshanda zvizere, saka tinotenda kuti iyi Beta 10 inogona kunge iri iyo Goridhe Master, kunyange tichazofanira kumirira kusvika Muvhuro unotevera na19: 00 dzemasikati kuti titarise. Mumazuva mana chete tichava neiyo yekupedzisira vhezheni yeIOS 4 yevashandisi vese nenhau dzayo dzisingaverengeke, usarasikirwa nazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Aya ndiwo maitiro iOS 11 akachinja kubva Beta 1 kuenda Beta 10
Fuaaaaaaaaaaa !!!! Handizive kana ndichigona kugara kusvika Muvhuro ...
Zvino kana kururamisa kweAifon kuri pachena!
Nguva dzose zvisizvo mune iyo 3D Kubata ...
Sezvo ivo vakaburitsa iyo 3D Kubata iyo ini ndinoida iyo mazuva ese.
Uuuuuuuuh…. Handikwanise kurarama ndisina iye…
Kufambira mberi muiyo iPhone kunoshamisa zvekuti kunyange Steve Jobs aizoibhadhara.
Iko kuzvishora kuri kupi mukambani iyoyo nhasi?
Pindura kune Zita
3 emahara kunyorera iwe kuti utore mukana wevhiki
Chaizvoizvo hapana munhu anoda "s" edition yeiyo iPhone 7